Ubuchopho bethu abusebenzi kusukela ngo-10.00 kuya ku-18.00, ngenkathi sihlezi ehhovisi, kodwa njalo, naphezu kokushintshashintsha okukhulu. Kufaka phakathi iphupho. Yonke iphupho umyalezo osuka engqondweni. Lokhu kwaqondwa ngisho nasendulo. Kodwa yini umuntu wethu wangaphakathi athi kithi, ukukhiqiza lokhu noma lelo phupho? Udinga incwadi yephupho
USocrates wacabangela amaphupho njengombonakaliso wezwi langaphakathi futhi weluleka ukumlalela. Abalobi be-Talmud bathi: "Yonke iphupho linomqondo, ngaphandle kwalabo ababangelwa indlala." Iphupho elingenakulinganiswa lifana nencwadi engavulwa. " UZizmund Freud ubizwa ngokuthi ukuchazwa kwamaphupho umgwaqo wasebukhosini owazi ulwazi. Ngokuvamile, i-psychoanalyst kuphela ekwazi ukuveza incazelo yomlayezo webusuku. Phela, zonke izindinganiso kufanele zenziwe ngabanye ngabanye, kunikezwe uhlobo, isipiliyoni kanye nezinkinga ezithile zomuntu. Ngakho-ke, ngisho nomhumushi ophelele kunazo zonke amaphupho esihlakalweni esicwebezelayo ngeke anikeze incazelo ephelele yalokho esiphupha futhi okubaluleke kakhulu ukuthi kusho ukuthini. Iphupho libonisa ubuntu. Uma umuntu ehlakaniphile kakhulu, kunzima kakhulu inkinga, amaphupho ebusuku ahamba phambili futhi alula kakhulu. Kodwa "amanothi" angenamahloni avela ngaphakathi "I" angafundwa yedwa, ngaphandle kokubhalela aphoyintimenti ne-psychoanalyst.
Inikezwa: umlingani wenza isipho, ucabanga ukuthi ngabe uyomshada yini. Futhi ngiphupha ukuthi uya endlini yomngane wakhe, osamukela thina nomkakhe (okungenjalo ngempela).
Umbuzo uwukuthi: kungani?
Impendulo: uzobe uzimisele kakhulu ukushada hhayi ngomusa wakho, kodwa kumngane wakhe. Umfazi ongokoqobo nguwe nawe ngokwakho, kodwa ukwamukeleka okuhle kubonisa ukuthi ungathanda le ndima. Ngakho-ke, ungasheshi ukuthi yebo. Ukwenqaba akudingekile, kodwa kungcono ukulinda ngomshado.
Ukuthandwa okungenalutho ukuthumela izimpawu ngamaphupho, okuqinisekisiwe ngokwesayensi. Izazi zengqondo zeNational University eDenver (USA) G. White noL. Tietro babuza ababambiqhaza ukuba babhale uhlu lwemisebenzi eyenzekayo, bese kuthi ezinsukwini ezingu-12 baqophele amaphupho abo abangakhohlwa. Futhi isigamu seqembu sathola umsebenzi wokucabangela into eyodwa kusuka ohlwini olufushane nsuku zonke, nangaphambi kokuzindla, ngaphambi kokulala. Ngenxa yalokho, bakwazi ukubhekana nemisebenzi yabo kalula nangempumelelo. Ngakho-ke singaphetha ngokuthi: ngezinga eliqaphelayo, yingxenye encane yezinkinga zokuphila ixazululwa.
Uma isakhiwo sokulala siphindaphindwa njalo, khona-ke ukukhuthazela okunjalo okungafanele kwenziwe kufanele kunakekelwe? Ikakhulukazi uma kuyinkinga yokubhuqa. Isibonelo, kukholelwa ukuthi ukuwela ephusheni (kusuka edwaleni kuya emgodini ojulile noma kusuka kubhaluni esakhiweni esiningi) kubonisa izinga lokukhathazeka nokukhathazeka kwengqondo. Ngaphezu kwalokho, ukuphakama kwedwala noma phansi, kuyinkinga enkulu kakhulu, kuyadingeka ukuyifinyelela ngokugcwele. Ukulibala ephusheni (esitimeleni, usuku, umhlangano) kuyisenzakalo esethusa. Lokhu kudlula umqondo wecala nokunganeliseki ngokwakho, ukuhlamba kwangaphakathi kwezenzo ezenziwe ngaphambilini.
Iphupho alinakusiza nje ekutholeni nasekuxazululeni inkinga ebalulekile, kodwa futhi kukhulula ukucindezeleka.
Inikezwa: ulokhu uzama "ukubeletha" umbiko weviki kakade. Futhi ebusuku ebusuku amaphupho, njengokungathi nganoma iyiphi indlela ayikwazi ukuzalwa (ngomqondo wangempela wezwi).
Umbuzo uwukuthi: kungani? Kungathatha ukuhlolwa kokukhulelwa?
Impendulo: lokhu kuyisiphithiphisi sephupho. Uhlanza udoti ekhanda lakhe: imicabango engadingekile, izinkathazo, izinkathazo. Amaphupho anjalo awavumeli ukuba unamathele kule nkinga futhi ungavumeli ubuchopho buphenduke ulwazi lokulahla. Futhi phakathi nala maphupho, umuntu oqaphele phansi uhlela imicabango yethu eqhubekayo nolwazi oluthola ubuchopho phakathi nocwaningo oluthile, ludonsela iziphetho noma imoto. Ekuseni umuntu uvuka futhi enze ukutholakala kwesayensi, kuphakamisa umugqa oqhakazile, umculo ovela kuNkulunkulu noma ... umbiko. UProfesa we-University of Oxford nomlobi wencwadi ethi "The Human Brain" uS. S. Greenfield weluleka wonke umuntu ukuba agcine ipeni nephepha etafuleni lombhede ukuze ngokushesha alungise imicabango ebalulekile, ephefumlelwe ukulala. Uma kungenjalo, ekuseni, kungase kuvele ukuthi umqondo omangalisayo, kanye nokuqukethwe kwephupho, ususwe ngokuphelele kwimemori.
Uma ubuthongo bulotshiwe, buzokwazi ukuthola ukucaca nokuqonda
Phinda ubhale ngezichazamagama ezintathu zamakholomu, izibizo nezenzo ozisebenzisayo, ubeka iphupho. Futhi uqaphele ukuthi yimiphi imizwa ebonakala kuyo. Isibonelo, kumagama angu-1 ekholomu ohlobo lwalolu hlobo: lukhulu, lugovu, alulungile; ezinsukwini ezingu-2 - izinyembezi, ukuhlubuka, ukuhlambalaza; okwesithathu - ngesaba, angifuni, ngikhathele ... Akunzima ukuqagela ukuthi imuphi umlayezo ovela ngaphakathi "I" obhalwe phansi ephusheni. Uma uyihlaziya ngendlela efanele, ungakwazi ukuxazulula ngokushesha inkinga yobuhlobo obungathandeki.
Ukulala akuyona iphupho
Singakwazi ukuzwa izwi langaphakathi hhayi ngamaphupho kuphela. Ngesikhathi sokuvuka ekuseni noma ukubuthwa phakathi nosuku, ukungabi nalutho nokuqaphela kusondelene kakhulu.
Isimo sokulibazisa ukuvusa.
Uvuka, ugeze ubuso bakho, wenze ikhofi, uvule umndeni wakho ... Futhi-ke i-alamu iyahamba. Kuvela ukuthi konke lokhu kwakulele ukulala - uma uvuka, waphinde waqeda. Ngakho kukhona ukukhathala okwenziwe, ngokomzimba noma ngokuziphatha. U-subconscious uthi: "Cha, ngeke ngikuvumele ukuba uvuke" futhi ukhohlise ukukholelwa ukuthi usuvele uvukile. Kufanele ucabange ngokuphumula okuphuthumayo! Hlala nje, ulale phansi nje. O, awusetshenziswanga ukuchitha isikhathi? Kodwa uyabona, ukuqonda okuqinisekisayo kuqinisekisa ukuthi manje nje udinga lokhu kuphumula.
Ngingubani? Ngukuphi usuku? Yini okufanele ngiyenze? Ingabe kufanele ngiphaphame futhi ngivuswe ngokushesha? Akudingekile ukuthi ubusuku obuphambili kwaba kusihlwa kusihlwa. Isimo esinjalo sivame ukwenzeka kubantu abanendlela yokuphila nomsebenzi, okokuqala, abanaso isimiso esicacile, futhi okwesibili, abanelisekile ngempela ngabo. Uma ukuvusa okunjalo (ngezinye izikhathi kuhambisana nezimpawu zemifino: ukushaya kwenhliziyo okusheshayo, ukuthuthumela, ukujuluka) kwenzeka kaningi, kusobala ukuthi isikhathi senza ukuphila kuhleleke ngokwengeziwe futhi kunenjongo.
Isimo "sokulala okubomvu."
Ukuvusa kuyamnandi. Okuthile okujwayelekile, okufuywayo, kodwa okufudumele kakhulu, kuhle ukuphupha. Futhi ekugcineni bavuke abafuni. Ngokuvamile kwenzeka ngokumelene nesizinda sezinkinga eziphuthumayo, lapho isimo sengqondo siseduze ne-subdepressive. I-subconscious isiza okungenani ukubuyela emuva ekuphileni okujabulisayo, ukukholelwa okuhle. Lungisa lesi simo (khumbula ukuthi yiziphi izinhlangano, imicabango onayo), ngezikhathi ezithile, zibize ngokuqaphela. Mhlawumbe, kuyisihluthulelo soshintsho oluhle.
Isimo sokuvuka kungazelelwe.
Ngiphakamisa njenge-push. Akukho ukulala, isimo se-sleep-sleep. Ngokushesha - eqinisweni. Okubalulekile okwenzekayo empilweni, futhi kunalokho, ngesibonakaliso "+". Kuthatha yonke imicabango kakhulu kangangokuthi i-subconscious ayifuni nakancane. Ngakho-ke, kulula ukwenza izinqumo. Kodwa ngakolunye uhlangothi, kulula ukwenza amaphutha. Uma kungekho isikhathi sokulalela imizwa yakho emini, khona-ke kufanele uzame okungenani ungalali ngokushesha. Akunakwenzeka ukuthi kulezi zikhathi ukuthi ukuqonda okunengqondo kwalesi simo kuzofika.
Kwaba nesikhathi esibi nezihlobo, ezinye izenzakalo ezimbi. Vuka, uthemba ukuthi kwakuyiphupho nje. Emva kwalokho, abantu babiza izihlobo zabo ukuthola ukuthi konke kulungile - ukulala kakhulu kufana nesandulela. Kodwa kunalokho, kungumlingo ocacile nje. Yilokho, empeleni akucacile: konke kubonakala kukuhle, okuhlangenwe nakho okuncane kuphela ("Kungani indodakazi iyingxenye nale ndoda?"). Kodwa lokho okungazi ukuthi kuyomsebenzi wakhe ukuxwayisa ngazo zonke izinhlobo zokuthuthukiswa kwezimo esihlokweni esithi "kukhona okungalungile".
Uvale amehlo akho okwesikhashana nje, futhi ngalesi sikhathi, okuningi kuyoba okuningi! Isibonelo, ezinye izenzakalo ezingafani, abantu abangajwayelekile - ngokufushane, okungajwayelekile. Isimo esinjalo sokuvusa kuyisibonakaliso sokuphila okulile futhi okulinganisiwe, imicimbi embalwa, ukubonakala, imizwelo ecacile. Mhlawumbe sekuyisikhathi sokwenza okuthile: hambisa, ushintshe imisebenzi, wenze abangane abasha. Yebo, kuyingozi kanye nesipiliyoni. Kodwa zidinga ukuvumelana okuphelele!
Imfihlo yokulala. Kungani ugcina indlu yasezindlini?
Inyama yenkomo yenkomo namazambane
Izinkondlo zeKhisimusi 2017 zezingane - Amavesi amancane ama-Orthodox wezingane mayelana noKhisimusi ngesiRashiya
Ikhekhe le-sand nge-custard
Imidlalo yokulala komuntu othandekayo
Imenyu yokuzalwa kwengane eneminyaka eyodwa
Ukucindezeleka kwe-Postpartum: Izimpawu
Ingane inezinyosi zamazinyo
Ukudla ukudla okudliwayo
Amaski alula okususwa ngokushesha kwemifudu yokukhathala